जान्नुहोस् ! कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको चरित्र कस्तो हुन्छ ? – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/जान्नुहोस् ! कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको चरित्र कस्तो हुन्छ ?
जान्नुहोस् ! कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको चरित्र कस्तो हुन्छ ?
जान्नुहोस् ! कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको चरित्र कस्तो हुन्छःआइतबार:आइतबार जन्मने व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् । उक्त बार जन्मने व्यक्तिको आयु पनि लामो हुने गर्छ । यस बार जन्मने व्यक्तिले सौन्दर्यलाई मन पराउँछन् । जसकारण आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै जसो प्रेम विवाह गर्ने गर्दछन् । उनीहरुले घर परिवारलाई खुसी राख्न निकै प्रयास गरिरेहेका हुन्छन् ।
सोमबार:बोलीमा निकै मिठास भएका व्यक्तिहरु सोमबार जन्मेका हुन्छन् । यो बार जन्मिएका मानिस संवेदनशील हुन्छन् र चाँडै नर्भस पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मने महिलाहरु भविष्यमा निकै माया र केयर गर्ने श्रीमतीको रुपमा परिचित हुन्छिन् ।मंगलबार:मंगलबार जन्मेका व्यक्ति निकै भाग्यमानी र धनवान हुने गर्छन् । यी व्यक्तिहरु निकै खर्चिला हुने गर्दछन् र आफ्नो निर्णय आफैँ लिने गर्दछन् । उनीहरुको वैवाहिक जीवन निकै सुखमय तरिकाले व्यतीत हुने गर्दछ र उनीहरुले निकै राम्रो जीवनसाथी पाउने गर्दछन् ।
बुधबार;बुधबार जन्मने व्यक्ति धर्म कर्ममा निकै विश्वास गर्ने गर्छन् । यी व्यक्ति विश्वासिलो र अरुले दिएका धोका सहन नसक्ने खालका हुन्छन् भने नयाँ–नयाँ कुराहरु जान्न निकै उत्सुक हुन्छन् । उनीहरुले सोचेभन्दा बढी सम्पति कमाउने अवसर मिल्छ ।बिहिवार:यो बार जन्मने व्यक्ति निकै विद्वान एवम् समझदार हुन्छन् । यी व्यक्ति आकर्षक हुन्छन् । स्वतन्त्रता मन पर्ने भएका कारण बन्धनमा बस्न चाहदैनन् । चाँडै नै मानिसहरुलाई विश्वास गर्ने हुँदा यसको प्रतिफल भोग्न पर्छ ।
शुक्रबार:शुक्रबार जन्मने मानिस रोमान्चक स्वभावका हुन्छन् । व्यक्ति निकै मिठो स्वर भएका हुन्छन् । शुक्रबार जन्मिएका मानिसको साथी धेरै भए पनि असल साथी कम हुने गर्दछन् । यी व्यक्तिहरु मेहनती र संघर्ष गर्ने हुँदा सफलता ढिलो पाए पनि स्थायी रुपमा पाउने गर्छन् शनिबार; बाल्यकालमा कष्टपूर्ण जीवन बिताएको भए पनि उनीहरुलाई त्यो भन्दा पछिको जीवन निकै सुखद रहनेछ । यी बार जन्मेका मानिसहरु जिद्दि हुन्छन् र आफूले भनेको हुनुपर्छ । यिनीहरूको वैवाहिक जीवन सुखमय हुन्छ किनभने यिनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई निकै केयर गर्छन् ।